10ka Shirkadood ee Nakhshad Garaafyada ugu Sareeya | Hal-abuurka Online
10ka shirkadood ee naqshadaynta garaafyada ugu sarreeya
Markaad u xiisayso naqshadaynta garaafyada, waxaad bilaabaysaa inaad eegto shirkadaha naqshadaynta garaafyada ee ka taagan dalkaaga, ama adduunka oo dhan. Adiga waxay kuu noqonayaan tixraacyo muhiim u ah shaqadaada maadaama aadan rabin inay ku ogaadaan laakiin sidoo kale inaad sameyso mashruuc ka sarreeya kan ugu fiican.
Laakiin, Waa maxay shirkadaha naqshadeynta garaafyada ugu fiican adduunka? Ma jiraan wax Spain ah? Waa ayo, maxay qabtaan, halkee ka shaqeeyaan iyo tusaalahee u horseeday guusha? Haddii aad rabto inaad ogaato, waxaanu kuu dhaafnay liiska 10ka ugu fiican.
1 Shanta sawir
6 Naqshadaynta Meta
8 Cog Farxad leh
10 Chase The
Pentagram waxay isku qeexdaa sida "Istuudiyaha naqshadeynta ee ugu weyn aduunka oo madax banaan". Waa shirkad ay maamulaan 25 la-hawlgalayaal ah, oo dhammaantood ah hoggaamiyeyaasha naqshadeynta garaafyada. Waxaan ka hadalnaa magacyada sida Michael Bierut, Alana Fletcher, Paula Scher ...
Hadda xaruntu waxay ku taal London laakiin waxay leedahay meelo kale New York, Austin, San Francisco iyo Berlin.
Waxaa doortay magacyo ay ka mid yihiin Rolls-Royce, Warner Brothers, Verizon, Starbucks ...
Maxayse shirkadu qabataa? Hagaag, isagaa mas'uul ka ah naqshadeynta buugaagta, ololaha, bandhigyada, sawirada, filimada, aqoonsiga astaanta ...
Shirkadaha naqshadaynta garaafyada ugu fiican adduunka, Landor Associates ayaa ku jirta kaalinta labaad. Waxaa aasaasay Walter Landor 1941 (wuxuu si fudud ugu sameeyay guri San Francisco ah). Shaqadiisu aad uma aysan soo bixin ilaa 1964-kii markii goobta uu bedelay uu sababay in uu ku boodo warbaahinta. Waxayna ku dhacday doonta Klamath, ee gacanka San Francisco.
Hadda, kaliya ma laha xaruntaas, laakiin waxaa jira 26 studios oo ku baahsan adduunka oo dhan.
Boggiisa internetka waxa ku jira oraah aan rabno in aan kuu keeno: «Walter Landor waxa uu alifay horumarinta astaanta. Wixii markaas ka dambeeyay waanu soo celinaynay.
Macaamiisha isaga ku kalsoon waxay ahaayeen Apple, Kellogg's, BMW, Volkswagen, PepsiCo, P & G ...
Maxayse qabataa? Shirkadan naqshadeynta garaafyada ayaa mas'uul ka ah la qabsiga iyo hirgelinta naqshadeynta astaanta iyo sidoo kale xaqiijinta, iyada oo loo marayo is dhexgal iyo teknoolajiyada macneheedu yahay in astaanta iyo alaabada la yaqaan. Xeeladooda, meelaynta, baakaddooda, aqoonsiga summada iyo falanqayntooda ayaa ah kuwa ugu wanaagsan suuqa.
AKQA laftiisa ayaa sheegaysa in ay tahay shirkad awood u leh in ay "samayso jidkeeda iyada oo loo marayo isbeddelka warbaahinta iyo farsamada." Waxaa la aas aasay 1995 magaalada London waxaana aasaasay afar saaxiibo ah, Axmed, Dan Norris-Jones, James Hilton, iyo Matthew Treagus. Hadda, waa mid ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ugu waaweyn adduunka, in ka badan 1500 oo shaqaale ah ayaa ka shaqeeya Yurub, Aasiya iyo Mareykanka.
Waxay leedahay macaamiil caan ah sida Nike, Google, Audi, Heineken ...
Marka la eego adeegyadeeda, waxay mas'uul ka tahay dhammaan wixii ka sarreeya bixinta istaraatiijiyad calaamadeed oo u dhexeysa naqshadeynta garaafyada ee astaanta illaa xayeysiinta iyo meelaynta alaabtaas.
Waa mid ka mid ah shirkadaha naqshadeynta garaafyada ugu caansan adduunka, gaar ahaan ka dib Olombikada xagaaga 2021 ee London, mar haddii la yiri calaamada iyagaa lahaa qiimihiisuna waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan.
Xaruntu waxay ku taal London, laakiin waxaa sidoo kale jira istuudyo ku yaal San Francisco iyo New York. Dhanka macaamiisha, wuxuu la shaqeeyay kuwa ugu wanaagsan: Wikimedia, Apple, 3M, eBay, Linkedln, Microsoft ...
Waxay ugu horreyn mas'uul ka tahay horumarinta istaraatiijiyad iyo naqshadeynta sumadda.
Tani waa mid ka mid ah shirkadaha naqshadeynta garaafyada ee diiradda saara aqoonsiga sumadda, xayeysiisyada, bogagga shabakadda, codsiyada, buugaagta iyo baayacmushtarka. Waxaa abuuray Stefan Sagmeister, abuuraha daboolka albamka ee The Rolling Stones, Aerosmith ama Lou Reed.
Shirkadda waxaa la aasaasay 1993 sida Sagmeister Inc. Laakiin 2012 waxay isu bedeshay Sagmeister & Walsh iyadoo lagu daray Jessica Walsh lammaane ahaan.
Hadda xaruntu waxay ku taal New York.
Waxaan hadda la soconaa mid ka mid ah shirkadaha naqshadeynta garaafyada oo leh in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah. Xarunteedu waxay ku taal San Francisco, inkastoo ay ku leedahay studios meelaha kale sida New York, Zurich, Berlin, Geneva, Beijing, Dusseldorf ama Lausanne.
Waxaa inta badan loogu talagalay abuurista summada iyo kicinta iyo sidoo kale in la sameeyo istaraatiijiyad dhammaystiran si loo gaaro guul. Noocyada aad la shaqeysay? Yves Saint Laurent, Apple, Lacoste, Adidas, Porsche.
Xaaladdan oo kale, shirkadaha naqshadeynta garaafyada ee adduunka, waxaan rabnaa inaan muujinno mid ka yimid Spain, Neoattack. Waxay ku taal Madrid iyo, Marka laga soo tago bixinta adeegyada naqshadeynta garaafyada, waxay sidoo kale bixisaa meeleyn, xayeysiis iyo suuqgeyn..
Dhanka macaamiisha uu la soo shaqeeyay waa: Pescanova, Opel, Repsol, Sanitas, BBVA ...
Cog Farxad leh
Haddii aad raadinayso mid ka mid ah shirkadaha naqshadaynta garaafyada ee ku guuleystay abaal-marinaha ugu badan, markaa waa inaad la sii jirtaa Happy Cog. Waxaa aasaasay Jeffrey Zeldman, xarunteedu waxay ku taal New York (oo kaliya halkaas, maadaama aysan ku lahayn studios qaybaha kale ee adduunka). Waa daraasad naqshadeed taas waxay u heellan tahay samaynta suuq-geynta dhijitaalka ah, xeeladda nuxurka, naqshadaynta iyo calaamadaynta summadaha.
Oo waa maxay calaamaduhu isaga ku kalsoon yihiin? Hagaag, kuwa muhiimka ah sida Nintendo, Google, Airbnb, Papa John's, Jaamacadda Stanford ...
"Waxaan naqshadeynaa xeelado kordhinaya khibradda qiimaha astaantaada." Tani waa sida shirkadda Isbaanishka Brandesign ay isu soo bandhigto. Si la mid ah kii hore ee Isbaanishka, kan sidoo kale wuxuu ku yaalaa Madrid adeegyadeeda ayaa diiradda lagu saarayaa U soo bandhig macaamiisha xeelad 360º ah, taas oo ah in la yiraahdo, waxay la macaamili doonaan laga bilaabo abuurista naqshadeynta garaafyada si loo horumariyo istaraatiijiyad si guul leh loogu xayeysiiyo astaanta.
Iyada oo ku saleysan Manchester, oo leh istuudyo ku yaal Preston iyo London, Chase waa mid ka mid ah shirkadaha naqshadeynta garaafyada ugu caansan ee adduunka. Waxa uu leeyahay waayo-aragnimo in ka badan 30 sano, wakhtigaas, waxa uu helay in ka badan 350 abaalmarino heer qaran iyo heer caalami ah.
Waxay inta badan u heellan tahay xayeysiinta, dhijitaalka ah, filimada iyo naqshadaha sumadda. Sababta shirkadaha sida Alibaba, Fujitsu, Shell, Yellow Pages, BBC ama Disney ay ula shaqeeyaan.
Waxaa jira shirkado badan oo naqshadeynta garaafyada ah oo aan ka tagnay, miyaad ku talineysaa magacyo si aad maskaxda ugu hayso?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 10ka shirkadood ee naqshadaynta garaafyada ugu sarreeya
Sida loo sameeyo portfolio xirfad leh